Saraakiil iyo gaadiid Alshabaab oo lagu qabtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Saraakiil iyo gaadiid Alshabaab oo lagu qabtay Muqdisho
A warsame 28 October 2014 28 October 2014
Mareeg.com: Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay iney todobaadkaan gacanta ku dhigtay 9 sarkaal oo ka tirsan Alshabaab, kuwaasoo laga qabtay Muqdisho, xilli baaritaano la sameynayey.
Xukuumadda ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada amaanku gacanta ku dhigeen ilaa 6 gaari oo ay leeyihiin Alshabaab, oo qaarkood lagu soo xiray walxaha qarxa.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, Ridwaan Xaaji Cabdilweli oo warbaahinta kula hadlay Mqudisho ayaa sheegay in raga Alshabaabka ee la qabtay yihiin kuwa la garanayo, islamarkaana lasoo taagi doono maxkamad.
“124 dad Soomaaliyeed ah oo qabtay waxaa laga dhex helay 9 ka tirsan Alshabaab oo la yaqaano, waxaana lasoo taagi doonaa maxkamad” ayuu Riwdaan Xaaji u sheegay warbaahinta.
Sidoo kale, afhayeenka ayaa yiri “146 gaari oo la baaray waxaa laga dhex helay 6 ay leeyihiin Alshabaab, sidoo kale waxaa la qabtay ilaa 5 qori iyo bastoolado”.
Inkastoo dowladda Soomaaliya mar kasta sheegto iney qabatay Alshabaab badan ama fashilsay qaraxyo ay ururkaasi abaabulayeen, hadana waxaa weli caasimadda ka dhaca qaraxyo mararka qaar lagu hoobto.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta ku wajahan Baydhabo (Sababta booqashada)
Diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeeyey afar bartilmaameed oo ku yaalla Jubada Hoose